FILAN-KEVITRY NY MINISITRA MANOKANA : “Fehezina faran’izay haingana ny fiparitahan’ilay valanaretina Covid-19”
Ny hifehezana ny tsy hiparitahan’ilay tsimokaretina “Coronavirus” izay efa tafiditra eto Madagasikara no imasoan’ny fitondram-panjakana ankehitriny. Mitady ny fomba rehetra ahafahana manatanteraka izany ny governemanta Malagasy. 23 mars 2020
Efa loza mihatra ho an’i Madagasikara sy ny mponina maherin’ny 25 tapitrisa ao aminy ilay tsimokaretina “Coronavirus”. Hatreto, miisa telo ny olona voamarina fa tena marary ary mbola mijanona ho io ihany aloha ny tarehimarika tena ofisialy hatreto. Hamehana ho an’ny Firenena malagasy ny fiatrehana an’ity valanaretina covid-19 ity satria raha ny antotan’isa nivoaka farany dia efa maherin’ny iray alina ireo namoy aina ka anisany ahitana olona betsaka maty indrindra ny ao Italia.
Ho an’i Madagasikara manokana dia mihatra hatrany ireo fepetra rehetra efa noraisina hatrany am-boalohany. Mikaon-doha andro aman’alina ihany koa ireo mpitondra mitady ny fomba rehetra tsy hampihanaka ny aretina ao anatin’ny fotoana fohy tahaka ny amin’ireo firenen-dehibe, izay misedra olana noho ny fiparitahan’ity Covid-19 ity. Ny harivan’ny sabotsy lasa teo dia nisy ny filan-kevitry ny minisitra manokana izay notarihin’ny Filoha Andry Rajoelina. Niompana tanteraka amin’ny ady atrehin’i Madagasikara manoloana ny valanaretina Covid 19 io filan-kevitry ny Minisitra io. Nilaza ny Filoha Andry Rajoelina fa tsy maintsy hatao ny fomba rehetra hifehezana faran’izay haingana ny fiparitahan’ity valanaretina ity. Raha toa mantsy, araka ny nambarany, ka tena mifindra amin’ny olona am-polony maro isan’andro ilay tsimokaretina dia tena ho sarotra ho an’ny fitondram-panjakana ny hifehezana an’io aretina io.
Nilaza ny Filoha fa tsy maintsy hisy ny fepetra horaisina mba hahafahana misoroka izany. « Ny voalohany dia ny eo amin’ny fifehezana haingana satria ny olona iray dia mifanerasera amin’ny olona betsaka. Ny olona iray dia afaka mamindra amina olona dimy farafahakeliny isan’andro. Raha tojo an’izany toe-javatra izany isika dia ho sarotra dia ho sarotra ny mifehy azy. Noho izany dia tsy maintsy maka fepetra mifandraika amin’izay isika”, hoy ny nambarany nandritra ity filan-kevitra manokana ity. Marihina fa anisany baiko nomen’ny Filoha ny tsy maintsy hanamafisana hatrany ny fampahalalana ny vaovao mifandraika amin’ny fivoaran’ ity trangan-javatra ity ho an’ny olom-pirenena. Tahaka izany ihany koa ireo fihetsika sy ny lamina tsy maintsy arahina mba hanamorana ny fisorohana hatao.
Hentitra amin’ny fisian’ireo mpanararaotra
Anisany voaresaka nandritra ny filan-kevitry ny Minisitra manokana hoenti-miatrika ny ady atao amin’ny tsimokaretina “Coronavirus” ihany koa ny fisian’ireo mpanararaotra. Hentitra ny Filoha raha nilaza fa handraisana fepetra avokoa izay minia manao izany. Efa nisy ny laharana maitso natao hantsoina maimaim-poana sy hametrahana fitoriana raha toa ka mahita trangana fanararaotana eny anivon’ny fiarahamonina eny. Voaresaka tao anatin’izany ny mahakasika ny fitaterana. Tranga misy, araka ny nambaran’ny Filoham-pirenena ny fampiakaran’ireo taksiborosy ny saran-dalana tao anatin’ny fotoana fohy. Misy zotra nasionaly, ohatra, 30 000 Ariary ny saran-dalana fanaony hatramin’izay dia niakatra avy hatrany ho 50 000 Ariary izany.
Tsy azo ekena ny fanararaotana ny samy Malagasy tahaka izany, raha ny fanazavana hatrany. Ireo minisitera voakasika no andrasana handray andraikitra manoloana izany. Ankoatra izay, ny vidin’ entana eny an-tsena izay nisehoana fanararaotana mihoapampana ora vitsy taorian’ny nanaovan’ny Filoha ilay fanambaràna ofisialy. Ny Minisiteran’ny varotra sy fanjifana izay voakasika manokana no handray an-tanana ny fanaraha-maso izany. Raha ny vaovao voaray farany dia mitohy hatrany ny fanaraha-maso ny toe-pahasalaman’ireo olona natoka-monina. Nanamafy ny Minisiteran’ny fahasalamana tamin’ny sabotsy teo fa tsy mbola nisy ny matin’ny Coronavirus teto amintsika ary tsy misy ahiana ny amin’ireo olona telo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina hatreto.